खाँदबारी अस्पताल जानुस, परिवर्तन पाउनुहुन्छः अध्यक्ष सुमन शाक्य (भिडियो सहित)
लामो ईतिहास बोकेको खाँदबारीमा रहेको जिल्ला अस्पताल तत्कालिन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तारामान गुरुङको पहलमा १५ शैयाबाट ५० मा पुराईयो । यो सँगै भौतिक संरचना निर्माणको काम पनि सुरु भईसकेको छ । जिल्ला अस्पताल पटक पटक चर्चामा आउने गरेको अस्पताल पनि हो । कहिले स्वास्थ्यकर्मी विचको द्वन्द्व, कहिले विरामीको आफन्त र अस्पताल प्रसासन विचको द्वन्द्व लगायतले चर्चामा आईरहेको हुन्थ्यो ।
झण्डै एक बर्ष अघि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले अस्पताल ब्यवस्थापनको जिम्मा लिए अर्थात अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरे । त्यस लगत्तै हामीले अस्पताल तपाईको कार्यकालमा कस्तो बन्छ ? के सुधार आउछ त ? भन्ने प्रश्न गरेका थियौं । त्यो बेला अस्पतालको सवै पक्षको सुधार गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभएको थियो । आज हामीले त्यही प्रतिबद्धता के पुरा हुँदै छ त ? भन्न विषयमा उनै शाक्यसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ ईमकालु अनलाईनकर्मीले गरेको कुराकानी ।
ठिक छ ।
जिल्लाको विकासले केही गति लिएको छ भनिएको छ । सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
कति पय ठाउँमा सन्तुष्ट छु तर कतिपय ठाउँमा केन्द्रबाट आएको बजेट फ्रिज भएको कुरा छ, त्यो दुखदायी कुरा पनि छ ।
आज अस्पतालको कुरा गर्छौ, अस्पतालमा के कस्तो प्रगति भईरहेको छ ?
हिजो हामीले जुन स्थानीय तहमा अस्पतपताल रहन्छ, त्यही तहले अस्पताल ब्यवस्थापनको जिम्मा लिन्छ भन्ने बुझेका थियौं । पछि प्रदेश एक सरकारले आफ्नो प्रदेश भरि चाँही जिल्ला अस्पतालको ब्यवस्थापनको जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिले लिने र प्रमुख अध्यक्ष बन्ने भन्ने निर्णय गरेपछि खाँदबारी अस्पतालको अध्यक्षमा म आएको हुँ । यस बर्ष मात्रै प्रदेश सरकारले ९० लाख चानचुन दिएको थियो । त्यस बाहेक सञ्चालन खर्च पनि दिन्छौ भनेका थिए तर पछि दिन नसक्ने भने । त्यहि बजेट ब्रेक डाउन गरेर खर्च गरेका छौं । ४२ लाख चानचुनको सामग्री खरिद गरेका छौं । ईन्डोस्कोपी, एक्स रे, बर्थिङ बेड, अचेत भएका विरामीलाई ब्युझाउने मेसिन ल्याईसकेका छौं र जडानको काम भईरहेको छ ।
अब रह्यो सरसफाईको कुरा । अस्पताल सफा राख्नको लागि रंगरोगन लगाईसकेका छौं, टायल विछाईसकेका छौ । पालो सिष्टमको लागि मेसिन जोडिसकेका छौ, अव पहुँचको भरमा कसैले पालो मिच्दैन । सफा खानेपानीको लागि ट्रिटमेन्ट प्लान राखिसकेका छौं । आकस्मीक कक्षहरुमा प्रत्येक बेडमा अक्सिजनको पाईप पुराईसकेका छौ । अस्पताल पुगेर हेर्नुहास, थुप्रै सुधारहरु पाउनुहुन्छ ।
यस अघिको अन्र्तवातामा यहाँको स्थानीय कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरेर भएपनि अन्तरद्वन्द्व समाप्त पार्छु भन्नुभएको थियो, अहिले कस्तो छ ?
हो समाप्त भएको छ । अहिले त्यस्तो समस्या छैन ।
कसरी टुंग्याउनुभयो, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको समस्या ?
हिजोको समस्या भनेको स्थानीय सिष्टरहरु विच र मेसुहरुको द्वन्द्व हो । स्थानीय सरकार आईसकेपछि स्थानीय कर्मचारीहरुले घर पायक काम गर्ने निति आयो, त्यहि भएर स्थानीय कर्मचारी सरुवा गराउन सकिएन । तथापी यहाँको खास समस्या के हो भनेर कर्मचारी र डाक्टरहरुसँग लगातार अन्तरकृया गरिसकेपछि काम गरेकाहरुले थप पाउने सुविधाहरुको बारेमा द्वन्द्व हुँदो रहेछ । हामीले गहिरो अध्ययन गरेपछि यो थाहा पाएर यसको ब्यवस्थापन गरेका छौं । जस्ले काम गर्छ, उसले पाउने ब्यवस्था गरेपछि सो समस्या सकियो । अर्को कुरा सवैले काम गर्नु पर्छ, अपनत्व सवैले महसुस गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा समिति र कर्मचारीहरु विच निरन्तर छलफल हुदै आएको छ ।
त्यो बेला विशेषज्ञ डाक्टर ल्याईनेछ भन्नु भएको थियो, तर विशेषज्ञ नै त देखिदैननी ?
हो, हामीसँग १५ बेडको अस्पताल थियो, अहिले ५० बेडको भएपछि १२ तहको डाक्टर हुनुपर्ने हो । तर आठौं तहको मात्र राख्न सकिरहेका छौं । यो भनेको एम्बिबिएस डाक्टर मात्र हो । यसले कत्तिको आउटपुट दिनसक्छ भन्ने तपाई हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो । यो राज्यले ब्यवस्था गर्नु पर्ने हो । तथापी, अहिले यो साउनदेखि प्रदेश सरकारले बजेट दिने भएको छ । विशेषज्ञ डाक्टरसँग पनि कुरा भईरहेको छ । सायद भदौ पहिलो हप्तादेखि हाम्रो आन्तरिक श्रोत र प्रदेश सरकारले दिएको बजेटले आफै एक जना डाक्टर राख्न सक्छौ । त्यो तयारीमा लागेका छौ । उक्त डाक्टरले ईण्डोस्कोपीदखि लिएर सामान्य सल्यकृया समेत गर्नेछ प्लस, अहिले निक साईमनले उपलब्ध गराएको डाक्टरलाई पनि सहज हुने अपेक्षा लिईएको छ ।
विभिन्न सामग्रीहरु थपिएको कुरा गर्नुभयो, पछिल्लो समय सामान खरिदमा कमिसनमा मिलेमतो पनि खुब हुन्छ भनिन्छ । सामान खरिदमा कतिको पारदर्शिता अपनाउनुभएको छ ?
हामीले सामान खरिदको लागि मात्र ४२ लाख छुटाएको हो । एक्स रे साढे ८ लाखमा, ईन्डोस्कोपी २२ लाखमा ल्याएको । त्यसमा त २ ३ वटा प्रतिष्पर्धीले दर रेट पेश गरिसकेपछि पनि गोप्य प्रतिष्पर्धा गराएर अझ घटाएका छौ । पछि उनीहरुले यत्तिको रेटमा अहिलेसम्म कसैलाई दिएको छैन भनेका छौं । कसैलाई संका लागे बिल भपाई हेरेर बजार भाउ हेर्न सकिन्छ ।
बन्दै गरेको नयाँ भवनको पनि कुरा गरौं, निर्माण कार्य अलि ढिलो भयो भन्ने गुनासो पनि छ नी ?
हो, अलि ढिलो चाँही भएको छ । अहिले पिलर उठेर बिट मार्ने काम भईरहेको छ । अहिले अस्पताल प्रमुखलाई सवै कार्य तालिका मगाउनुस भनेको छु । अर्को कुरा यसको कार्यालय धनकुटामा छ । उनीहरु यहाँ आउदा पनि हामीलाई जानकारी नदिने भएकोले समन्वयमा समस्या भईरहेको छ । तर उहाँको जो प्रतिनिधी यहाँ छ उसलाई बोलाएर झक्झकाउने काम भने भईरहे छ ।
हाम्रो जिल्लामा स्वास्थ्य विमा लागु हुँदैछ । त्यसको लागि पनि जनशक्ति अनिबार्य छ । स्वास्थ्य विमाबाट सेवा लिनेहरु रित्तो हात नफर्कियोस भन्ने हेतुले सुविधा बढाउन लागिरहेका छौं । र अस्पताल हाम्रो हो, तपाई हामीले नै राम्रो बनाउने हो । अन्त भन्दा सरकारी अस्पतालमा नै उपचार पद्धती राम्रो हुन्छ, त्यो सोचेर सेवा लिन अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद ।
लोकसेवाको ठेली छोडेका संखुवासभाका बिशाल यसरी बने ‘युटुब किरो’
प्रदेश १ मा आज मात्र ७६० जना संक्रमित थपिए
प्रदेश १ झन जटील बन्दै,आज मात्र ७२५ संक्रमित थपिए